Diinta Islaamku maxay ka qabtaa in kas loo dilo Muslim aan waxba galabsan-Dhageyso | Radio Muqdisho
Diinta Islaamku maxay ka qabtaa in kas loo dilo Muslim aan waxba galabsan-Dhageyso
Published on December 4, 2012 by Admin 2 · No Comments · 4,127 views
Diinta Islaamku waxay reebtay in la dilo dadka aan waxba galabsan ee Muslimka ah, Allena wuxuu ugu gooddiyay qofkii si kas ah u dilo qof Muslim ah oo aan waxba galabsan cadaab daran.
Maleeshiyada Al-Shabaab ee diinta ka been sheegtay ayaa jabiyay ammarkaas, waxayna dilaan dadka bulshada indhaha u ah oo ay ku jiraan Odayaasha dhaqanka, Dhaqaatiirta iyo Wariyeyaasha.
Sidoo kale Shabaab waxay dileen dad badan oo u shaqeynayay qaranka Soomaaliyeed oo isugu jiray ciidan iyo shibil, ayagoo gaaleysiiyay si ay u dilaan qof kasta oo aan ku feker ahayn.
Shareecada Islaamku sida ay u reebtay in la dilo qof Muslim ah oo aan waxba galabsan waa mowduuca uu ku saabsan yahay todobaadkaan barnaamijka Tubta Toosan oo uu marti ku yahay Sheekh Muuse Macalin Cagaweyne oo ka mid ah Culunada Soomaaliyeed.
Barnaamijkaan waxaa ka qeyb galay qaar ka mid ah dhageystayaasha oo su’aalo weydiiyay Sheekha, waxaana ka dhageysan kartaa link-gaan hoose.